အကယ်ဒမီစာရင်းက ဖယ်ရှားသင့်သူများ ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
12/27/2014 02:43:00 am ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
ပြက္ခဒိန်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးလု နီးချိန်ရောက်တိုင်း ကာယကံရှင် သရုပ်ဆောင်တွေရော၊ ၀ါသနာရှင် ပရိသတ်တွေပါ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားကြမြဲဖြစ်တဲ့ ‘‘အကယ်ဒမီ’’ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို မြန်မာအဘိဓာန်မှာ တွေ့ရမလားလို့ ကျွန်တော်လှန်ရှာကြည့်သေးပေမယ့်ဘာကြောင့်မှန်းမသိထည့်သွင်း ဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။
သူ့နည်းတူအသုံးကြာလာ လို့ မွေးစား စာလုံးဖြစ်နေရတဲ့ အယ်ဒီတာတို့၊ အင်ပါယာတို့၊ အောက်စီဂျင်တို့လို ဝေါဟာရ တချို့ကိုတော့ တွေ့ခဲ့ရပါရဲ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီစကားလုံးဟာ မြန်မာလူမျိုးတိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား မို့ အဓိပ္ပာယ်အကျယ်ကို သိနေကြ မှာဖြစ်တဲ့အလျောက် ကျွန်တော့် သဘောဆို မိမိကျရာ ဇာတ်ရုပ်ကိုသဏ္ဌာန်လုပ် သရုပ်တူအောင် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ တင်ဆက် ပြသနိုင်မှုကြောင့် အမွှမ်းတင်ချီး မြှောက်ခံရခြင်းလို့ပဲ အနီးစပ်ဆုံး ဖွင့်ဆိုကြည့်ချင်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းပြောကြကြေး ဆို ရုပ်ရှင်အနုပညာအကြောင်း ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်လှတာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲ . . . ဒါပေမဲ့ ‘‘သဏ္ဌာန်လုပ် သရုပ်တူမှု’’တည်း ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင်အတတ်ပညာ အကြောင်းတော့ အတန်အသင့် လောက် တီးခေါက်မိထားသူ စာ ရေးသမားတစ်ယောက်ပီပီ မျက် မှောက်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးထဲက ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုရော၊ ကကြိုးကကွက်တချို့ အပေါ်ပါ မျက်ခြည်အပြတ်မခံဘဲ၊ တာဝန်ခံရမှာပါ။ ဒါကြောင့်အခုလည်း ၂၀၁၄ အတွင်း ပရိသတ်ပြည်သူတွေ ထူးထူးခြားခြားထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ လက်လှမ်းမီရာ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေသာမက နှစ်ခြိုက်သဘောခွေ့ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေကိုပါ အကဲဖြတ်စောကြောသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အလျောက်ပထမဆုံးတော့ မူလနဂိုအနေ အခင်းအကျင်းလို့ ပြောရမယ့် ပေးထားချက်ဇာတ်ရုပ်ကို ပြန်မြင်ယောင်ကြည့်ရှုထားရဦးမယ် လို့ထင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူပရိသတ်အ ပေါင်းသိမှတ်ထားကြတဲ့အတိုင်း ဆို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအစိုးရ အဖွဲ့အပါအ၀င် အဓိကနေရာ အသီးသီးက လှုပ်ရှားကပြနေသူ အားလုံးနီးပါးဟာ ယခင်စစ်အစိုး ရအဖွဲ့ဟောင်းက သူတွေချည်း ဖြစ်ခဲ့တာမို့ အထူးအားဖြင့် ‘‘မူ သာပြောင်းပြီး လူမပြောင်းသေး တဲ့ အစိုးရ’’လို့ သူသူ၊ ငါငါခေါ် တွင်နေကြတာကိုက ဒါဟာ နောက်ခံမူလဥပဓိရုပ်ဆိုတာ အရှင်းသားနားလည်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ထား။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ ၂၀၁၄ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာပြည် သူတွေနဲ့ မြန်မာအစိုးရကို (၂၀၁၃ မကုန်ခင်ကတည်းက) ကြိုနှင့်နေတဲ့ အဓိကဇာတ်လမ်း ကျောရိုးကြီးအဖြစ် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စကို တွေ့ခဲ့ရသလိုအဲဒီကိစ္စကို အကြောင်းပြုလို့ပဲ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှုတ်က ထွက် ကျလာတဲ့ ဒိုင်ယာလော့ခ်တချို့ ဟာ ၂၀၁၄ ကို ကြိုဆိုရာ ရောက် ခဲ့တယ်ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ဘူး။
တကယ်ဆို အခြေခံဥပဒေအရေး ဟာ သမ္မတ၊ တပ်ချုပ်နဲ့ လွှတ် တော်အကြီးအကဲတွေအားလုံးက ခေတ်နဲ့ အညီပြင်ဆင်သွားရမယ် တို့၊ အများဆန္ဒအတိုင်း ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်တို့ ဆိုတာ မျိုးတွေ လူသိရှင်ကြားပြောထား ပြီးသားမို့ သာမန်အားဖြင့်ဆိုရင် စိတ်အေးစရာလို့တော့ ထင်နိုင်ပေမယ့် ပြည်သူလူထုကြားကျယ် ပြန့်စွာ ဂယက်ထလာခဲ့တာမို့ ညင်သာစွာ ကျော်လွှားသွားနိုင်ရေး မျှော်မှန်းချက်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး လူ ထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးအဖြေရှာရေးကို စာပို့ တောင်းဆိုလိုက်တော့တယ်။
ဒီမှာတင်ပဲ တစ်ပတ်လောက်အကြာ ဧရာဝတီတိုင်းက ငွေ ဆောင်မြို့နယ်ခွဲနဲ့ ရန်ကုန်တက္က သိုလ်စိန်ရတုခန်းမတွေမှာ ပြောခဲ့ တဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်မိန့်ခွန်းထဲ ဘာတွေပါလာသလဲဆိုတော့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေးနည်းလမ်း တွေရှောင်ရှားဖို့ဆိုတာနဲ့ မင်းသား
ကြီးမလုပ်ရလို့ ပတ်မကြီးထိုး ဖောက်ချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ဖျောက်ဖျက်ပစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဒိုင် ယောလော့ခ်တွေပေါ့။ ပြန်စဉ်း စားကြည့်တော့ ဒီလိုအသုံးအနှုန်း မျိုးတွေဟာ ၉၀ ပြည့်နှစ်အလွန် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမုန်တိုင်းထန်နေ စဉ်ကာလတွေတုန်းကသာ ရေပန်းစားခဲ့ဖူးတာအားလုံးလည်း အသိမို့ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ အံ့အားသင့်မိကြတာ အမှန်ဖြစ်ပေမယ့် သြော် . . . ဒါ ကလည်း ဖြစ်တတ်တဲ့ ဇာတ်လမ်း၊ဇာတ်ကွက်သဘာဝတွေအရ လွမ်းခန်းရှိသလို ကြမ်းခန်းလည်း ရှိနိုင်တာပဲလေဆိုပြီး အခိုက်အ တန့်ခံစားမိတာကလွဲလို့ ဖြေ လျှော့နိုင်ခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား။
တကယ်တော့ ၂၀၁၄ အတွင်းမှာ အခြေခံဥပဒေပြင် ဆင်ရေးအကျပ်အတည်းကြီးဟာ ဇာတ်တစ်ခုလုံးကို လွှမ်းနေတာနဲ့ မခြား ယူဆရမလိုဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဒါထက်ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ ကောင်းနေတာက ဇာတ်သဘော ပီသစွာ အလှည့်အပြောင်းတွေ၊ အကွေ့အ၀ိုက်တွေ၊ အတက်အ ကျတွေ၊ အဖိအဖော့တွေနဲ့ မထင် မှတ်ရတဲ့လှည့်ကွက်၊ မြှုပ်ကွက် အချို့ကိုပါ ရှုမြင်ခံစားခဲ့ကြရသေး လို့ပါ။ တခြားမကြည့်ပါနဲ့၊ ပီအာရ်ကိစ္စဆိုတာ တစ်နိုင်ငံလုံး ကျွက်ကျွက်ညံပြီးမှသာအေးသွား ခဲ့ပေမယ့် လှစ်ခနဲ ဖြတ်ဝင်လာ လိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူထင်ထားခဲ့ လို့လဲ။ တစ်ဆက်တည်းပြော လိုက်ရရင် ပီအာရ်စနစ်ကျင့်သုံး ရေး၊ မကျင့်သုံးရေးအတွက် လွှတ်တော်မှာ ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေး ကြစဉ်က တပ်မတော်သားကိုယ် စားလှယ်တွေရဲ့ ရပ်တည်ချက် ဖြစ်တဲ့ ‘‘ဒီတစ်ကြိမ်ကျင့်သုံးရန် မသင့်သေး’’ဆိုတာကြားလိုက်ရ တော့ ကျွန်တော်ဆို‘‘ဟာ . . . တယ်ကောင်းတဲ့ သဘောထားပါ လား’’ဆိုပြီး အဲဒီဇာတ်ဝင်ခန်းကို မှင်တက်ခဲ့ရသလောက် မျက် တောင်မခတ်ဘဲလည်း ကြည့်နေမိရာက အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး အခန်းရောက်လာချိန်မှာတော့ သေပြီဆရာဖြစ်သွားရတယ်။
ကြည့်ပါလား။ ၅၉ လည်း ခါးခါး သီးသီး၊ ၄၃၆ လည်း ပစ်ပစ်ခါခါ။ မာလိုက်တဲ့ ရပ်တည်ချက်၊ တင်း လိုက်တဲ့ သဘောထား။
ထူးမခြားနားပါပဲ။ အာဏာ ရပါတီကြီးဆိုလည်း အခြေခံဥပ ဒေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စကို တစိုက် မတ်မတ်တောင်းဆိုနေခဲ့တာက အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီဖြစ်ပေမယ့် လွှတ်တော်ကို ခြေမြန်၊လက်မြန် တကယ်တင်သွင်းလိုက်တာက သူမှ သူအစစ်မို့ ယုံတောင်မယုံ ချင်စရာဖြစ်ခဲ့ရသေးတာအ ဟုတ်။ နောက်ဆုံးတော့ တကယ် မှတ်လို့ ကြက်သေသေပြီး ကြောင်
ကြည့်နေမိတဲ့ ကိုယ်တွေပဲ ငုတ်
အဲဒီလိုအဝေ့အ၀ိုက်က လေးတွေနည်းတူ ပါးစပ်အ ဟောင်းသားနဲ့ တောင်ကြည့်၊ မြောက်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ရသေးတာ တစ်ခုက အဲဒါဘာရှိဦးမလဲ လွှတ် တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးပေါ့။ လုပ်ပုံပြော ပါတယ်။ ၂၀၁၅ မှာ သမ္မတဦး သိန်းစိန်ထပ်မံအရွေးခံမှာ မဟုတ် တော့တဲ့အကြောင်းသူ အခိုင်အ မာသိထားရသတဲ့။ တချို့တွေ စိတ်မကောင်းလွန်းလို့ မျက်ရည် တောင်လည်ကြတယ်ဆိုလား။ ထင်မြင်ချက်တွေရော၊ သုံးသပ် မှန်းဆချက်တွေပါ ပေါ်ထွက်လာ ခဲ့ပြီး ဟော . . . နောက်တစ် ရက်လည်းကျရော ပြောရေးဆို ခွင့်ကြီးက တစ်ဆင့်ရှင်းချက် ထုတ်သံကြားလိုက်ရတယ်။ သမ္မတကြီးသဘောထားအစစ် အမှန်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ အချိန် တန်ရင် ၀င်၊ မ၀င်ကိစ္စသူကိုယ် တိုင်ပြောပါ့မယ်တဲ့။
ကဲ . . . အဲဒီလိုပါဆို၊ လူ တွေမှာ ငိုရတော့မလို၊ ရယ်ရ တော့မလို၊ ထိုင်ရတော့မလို၊ ထရတော့မလို ဒါမျိုးတွေ ဖြစ် ပေါင်းလည်း မနည်းတော့ဘူး။ အေးလေ . . .ဒါကိုက ပြောင် မြောက်တဲ့ အတတ်ပညာဆိုတာ မျိုး ရပ်ကွက်ထဲမှာ မှတ်သားခဲ့ရ ဖူးသလို တကယ်ဟုတ်ချင်လည်း ဟုတ်နေမှာပေါ့။
အခုအဲဒီမနောမနည်းတွေ ထဲကပဲ သတိရလို့ ပြောလိုက်ရ ဦးမယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ လေးပွင့် ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ် မြောက်ရေးအတွက် ဟိုက၊ ဒီက ၀ိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပြီး ဆန္ဒတွေ ထုတ်ဖော်ပြနေကြတာ။ ၂၀၁၃ နို ၀င်ဘာ ၂၃ ရက်က စတင်ရေ တွက်
တွေ့မယ်တွေ့တော့ အာဆီယံ အစည်းအဝေးကြီးနီးကပ်နေခါမှ ပဲ ၁၄ ပွင့်ဆိုင်ဆိုပြီး ထလုပ်လိုက် တယ်။ ဒါမျိုးကျတော်တော်အား တယ်လေ။ ပြောရရင် ဒါဟာ နောင်မှ ရင်းနှီးယုံကြည်မှုတွေရှိ လာစေဖို့အတွက် အဦးအစ ပထမ
ခြေလှမ်းပါလို့ ဘယ်လိုပဲဆိုဆို ပရိ
သတ်တွေ သိပ်ခံတွင်းမတွေ့နိုင် ဖြစ်ခဲ့ရတာက ခါတော်မီရုပ်ပြ ဆန်နေတယ်ဆိုတာထက် ဘာ ရလဒ်မှ မထွက်ပေါ်ခဲ့ဘဲဖြစ်က တတ်ဆန်းနိုင်လွန်းခဲ့တာကြောင့် လို့ပဲထင်မိတယ်။ တကယ်လို့သာ အခုထက် နည်းနည်းလေးစော တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် သဘာဝကျတဲ့ ပြကွက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ရုံသာမ က ရသပိုင်းအရလည်း ပိုကြွလာ နိုင်စရာအကြောင်းရှိပါလျက် အခု
တော့ သို့လောသို့လောတွေဖြစ်ခဲ့ ရတာပဲ အဖတ်တင်သွားတော့ တယ်။
ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့၊ ဖြစ်ခဲ့ ၂၀၁၄ ဇာတ်ထုပ်ကြီးတစ်ခု လုံးရဲ့အစပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်းနဲ့ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမရောက်ခင်တွေ အထိ ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်း လွမ်းခန်းနဲ့ လန်းခန်းတွေထက် အကြမ်း၊ အရမ်း၊ အသွမ်းတွေက အတော်အတန်ပိုများခဲ့တာတော့ တွေ့ရပေမယ့် သရုပ်မှန်ပြကွက် တွေရော၊ ပြောင်မြောက်တဲ့ ဟန် ပန်အမူအရာတွေပါ ရှိသင့်သ လောက်ရှိနေတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်ပြောရမှာပါ။ ဒါကြောင့် လည်း ပါဝင်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်အသီးသီးတို့ရဲ့ အားပြိုင် လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်အကဲဖြတ် ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဆုံးဖြတ်ဝေခွဲ ရ ခက်စေတာတွေနဲ့တောင် ကြုံခဲ့ရ သေးတယ်ဆိုရင် တချို့က ယုံချင် မှ ယုံကြလိမ့်မယ်။
ဥပမာ . . . လစဉ်ကြားနေ ကျဖြစ်တဲ့ မိဘပြည်သူများ ခင်ဗျာ လို သံနေသံထားမျိုးဆိုပါတော့။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ခြောက်လ အလိုမှာ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင် ပြီး ဖြစ်ရမယ်လို့ တည်ကြည်ခံ့ ညားတဲ့ အိုက်တင်မျိုးဆိုပါတော့။ သန့်ရှင်းမျှတမှုကတိစကားအပါ အ၀င် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ‘‘ကြားဖြတ်’’ကျင်းပပေးမယ်လို့ ရသမြောက် မှုမျိုးဆိုပါတော့။ နိုင်ငံကြီးနှစ်ခု ကြားမှာ ရောက်နေလို့ အခြေခံ ဥပဒေခိုင်မာမှုရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာ တွေလို ယုတ္တိလည်း တန်၊ အ သက်လည်းပါတဲ့ စံနှုန်းပြည့်ပြ ကွက်တွေကြောင့်ပဲ မူလဇာတ်ရုပ်ကိုတောင် မေ့ပျောက်သွားစေ လောက်အောင် ကျွန်တော်တို့ ပရိသတ်ပြည်သူတွေအယောင် ယောင်အမှားမှားဖြစ်မိကြသေး တယ်လို့ ဆိုနိုင်မှာပါ။
သြော် . . . တကယ်ဆို ‘‘သဏ္ဌာန်လုပ် သရုပ်တူရမြဲ’’ဆို တဲ့ အမှာစကားအတိုင်း ကိုယ့် အနုပညာကိုရော၊ အတတ်ပညာ တွေကိုပါ နှစ်ဆုံးချိန်အထိ ဆက် ထိန်းထားလိုက်ကြဖို့ ကောင်းတာ ပေါ့။ ဒါဆိုရင် ထူးချွန်ပြောင် မြောက်မှုအတွက် အကယ်ဒမီ စာရင်းထဲတောင် ၀င်ချင်ဝင်နိုင်ဦး မှာ။ အခုတော့ ပြီးခါနီးလေးမှ ကပ်ဖောက်သွားရတယ်လို့။
ကြည့်ပါဦး ‘‘လွှတ်တော်ထဲ ၀င်ထိန်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ စစ်တပ်က ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပါနေရ တာ’’တဲ့။ ‘‘တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ် ဆူပူလာရင် စစ်တပ်က အာဏာ သိမ်းရမှာပဲ’’တဲ့။ ‘‘ဒီမိုကရေစီရေ ချိန်အဆင့်လိုက်ပေးသွားဖို့ အ တွက်တင်းကျပ်ထားရတာ’’ တဲ့။ ‘‘၆၂ အာဏာသိမ်းမှုမှာ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေရှိနေသ တဲ့’’။ ‘‘တပ်မတော်ကို ထိပါးလာ လို့ ၈၈ မှာ မလွှဲမရှောင်သာ အာ ဏာသိမ်းခဲ့တာ’’တဲ့။ ‘‘အင်န် အယ်လ်ဒီ ကို အာဏာမလွှဲတာ အာဃာတတွေ ထားခဲ့လို့ပါ’’တဲ့။ အံ့ရော . . .။
စစ်တပ်အစိုးရတွေ ခြယ် လှယ်အုပ်စိုးခဲ့လို့ တိုင်းပြည်စုတ် ပြတ်မွဲပြာကျသွားရတာ တစ်ခုပဲ ထည့်ပြောမသွားဘူး။
အေးလေ၊ နောက်ဆုံးတော့ မြွေဆိုတာ အရေခွံဘယ်လို ပြောင်းပြောင်း အဆိပ်ထုတ်မ ထားရင် အန္တရာယ်ရှိနေမြဲမို့ မြွေ ဟာ မြွေပဲဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အခုလည်း ဇာတိအမှန်လှန်ပြ လိုက်တာနဲ့ ဘာခြားတော့မလဲ။ တကယ်ဆို ကိုယ်ရထားတဲ့ နေရာ က ဒိုင်လူကြီးနဲ့တူတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ။ တာဝန်က တခြား ပြောထွက်ခဲ့တဲ့ နှုတ်စကားကတခြား။ ဒီလိုပါပဲယုံလောက်အောင် ပါးစပ်က ဘယ်လိုပဲ အသံကောင်းဟစ်နေနေ လက်တွေ့မှာ ထင်ရာစိုင်းတတ်တာတွေ မသိခဲ့လိုတော့ မဟုတ်ပေမယ့် ခေတ်၊ စနစ်တွေ ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုမှတော့လည်းဘယ်ထင်ပါ့မလဲ။ ပြောရင်းဆိုရင်း အခုတောင် လက်ပံတောင်းတောင်ပေါ်မှာ လက်တွေ့ကျကျ သက်သေပြလိုက်ပြန်ပြီ။ ဟူး . . ။
စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းခြင်းများ စွာနဲ့အတူ ဒီမှာတင်ပဲ ‘‘၂၀၁၄ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး’’လို့ အမည်ရတဲ့ အကယ်ဒမီစစ်တမ်းကြီးလည်း ပြီး ဆုံးခဲ့ပါပြီ။ တစ်ခုရှိတာက ကျွန် တော့်အနေနဲ့ လိုက်နာစောင့်ထိန်း ရမယ့် ကျင့်ဝတ်တချို့ရှိနေပြန် တာမို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာမပေးနိုင် တာကို (ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိရ ကောင်းလားလို့) နားလည်မှုမလွဲ စေချင်ဘူး။
ဆုရရှိသူစာရင်းကို လော လောဆယ်လျှို့ဝှက်ထားလိုက်ရ တဲ့တိုင် ဆန်ခါတင်အဆင့်အထိပဲ ၀င်တော့မလိုလိုနဲ့ တကယ့် တကယ်မှာ ပဏာမစာရင်းက တင် ဖြုတ်ပယ်ဖယ်ရှားထားခဲ့ရ သူတွေထဲ ဘယ်သူတွေပါဝင်သွား တယ်ဆိုတာကိုတော့ မိဘပြည် သူပရိသတ်အားလုံးလည်း ကျွန် တော်နဲ့ ထပ်တူအမြင်သဘော ထားတိုက်ဆိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ယူဆမိကြောင်းပါ။
မှတ်ချက်။။ ယခုစစ်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားစိစစ်ရန်အ တွက် အရေးပါသော ဇာတ်ဝင် ခန်းတချို့ကြွင်းကျန်သွားခဲ့နိုင်ပါ ၍ သက်ဆိုင်နေသူတိုင်းအား တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
အဲအေးရှား လေယာဉ်တစီး အင်ဒိုနီးရှားမှ စင်ကာပူသွားစဥ...
၂၀၁၃ ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆုရှင်...
မြန်မာနိုင်ငံသားများအားသတ်ဖြတ်သည့်တရားခံ ၁၁ ဦးအမိ...
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု သက်သေစာရင်း တင်သွင်း